Kooxaha Arsenal, Inter Milan iyo Tottenham oo xiddigo cusub la wareegay & Heshiisyada dhacay saacadihii ugu dambeeyey… + SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 02 Luulyo 2019. Aqaristayaasheenna sharafta leh waxaan halkaan hoose idin kugu soo gudbinaynaa wararka ugu waa weyn dhanka ciyaaraha ee caawa & weliba heshiisyada illaa iyo haatan dhacay saacadihii ugu dambeeyey.
Haddii aynu soo qaadanno heshiisyada dhacay saacadihii ugu dambeeyey, waxaa ka mid ah in kooxaha Arsenal iyo Inter Milan ay saxiixyo cusub sameeyeen, halka Tottenham ay labo ciyaaryahan la wareegtay maanta.
>- Inter Milan ayaa xaqiijiyey inay kooxda Sassuolo kala soo saxiixatay ciyaryahan Stefano Sensi.
Waxa ay ku soo qaateen heshiis amaah ah oo ay dookh u haystaan inay iibsadaan dhamaadka xilli ciyaareedka.
>- Arsenal ayaa xaqiijisay inay la saxiixatay da’yarka reer Brazil ee Gabriel Martinelli.
Gunners waxa ay Martinelli heshiis wakhti dheer kaga soo qaateen kooxda Ituano, waxaana la warinayaa inay weeraryahankan kula soo wareegeen adduun dhan 6 milyan oo gini.
>- Kooxda Tottenham ayaa sameysay saxiixeedii ugu horreeyey 517 maalmod kaddib markaasoo ay la soo saxiixdeen Lucas Moura.
Waxaa ay maanta Jack Clarke kala soo wareegeen naadiga Leeds United, isagoo u saxiixay heshiis afar sanadood ah.
>- Dhinaca kale Tottenham ayaa dhammaystirtay saxiixa Tanguy Ndombele oo ay kala soo wareegeen naadiga Lyon.
Waxa ay kula soo wareegtay Spurs heshiis rikoorka kooxda ah oo dhan 60 milyan oo euro oo lagu daray 10 milyan oo euro oo ah gunnooyin, taasoo ka dhigan inuu yahay ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxdan.
>- Kooxda Stuttgart ayaa xaqiijisay inay naadiga PSG kala soo wareegtay ciyaaryahan Tanguy Coulibaly, waxaana uu qalinka ugu duugay qandaraas afar sanadood ah.
>- Hector Herrera ayaa xaqiijisay inuusan heshiis cusub u saxiixi doonin kooxdiisa FC Porto, waxaana uu ka tagi doonaa naadigan kaddib lix sanadood oo uu ku sugnaa.
>- Kooxda Frankfurt ayaa xaqiijisay inay naadiga Malaga kala soo wareegtay ciyaaryahan Rodrigo Zalazar, waxaana uu qalinka ugu duugay qandaraas afar sanadood ah.
>- Florentino Luis ayaa heshiiska u kordhiyey Benfica, waxaana uu u saxiixay qandaraas cusub oo shan sanadood ah, kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa sanadka 2024-ka.
>- Robert Snodgrass ayaa heshiiska u kordhiyey West Ham United, waxaana uu u saxiixay heshiis han sano ah oo kooxda ku sii hayn doona illaa sanadka 2021-ka.
>- Kooxda AS Monaco ayaa xaqiijisay inay la soo saxiixatay Gelson Martins, kaasoo ay ka soo qaateen naadiga Atletico Madrid.
Waxaa la warinayaa inay kula soo wareegeen adduun dhan 19.6 milyan oo gini, waxaana uu Monaco qalinka ugu duugay heshiis shan sanadood ah.
>- Rafael Benitez ayaa la xaqiijiyay inuu noqon doono macallinka cusub ee kooxda Dalian Yifang oo ka dhisan dalka Shiinaha, Wargeysyaduna waxa ay leeyiiin Benitez waa lacag doontay.
>- Kooxda Bristol City ayaa xaqiijisay inay si joogto ah ula wareegtay Tomas Kalas, kaasoo ay kala wareegeen Chelsea, waxaana uu u saxiixay heshiis afar sanadood ah.
>- PSG ayaa xaqiijisay inay la soo saxiixatay Pablo Sarabia, kaasoo ay kala soo wareegeen kooxda Sevilla, waxaana uu qalinka ugu duugay qandaraas shan sanadood ah.